Sababihii Dagaalka iyo Saamayntii uu ku yeeshay Jamhuuriyaddii Soomaalida
Buuggan magaciisu yahay Milicsiga dagaalkii dhexmaray xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre iyo Jabhaddii SNM. Waxa uu ku saabsanyahay saamayntii uu dagaalkaasi ku yeeshay dadkii iyo dalkii Jamhuuriyaddii Soomaalida. Sannadkii 1988kii bishii Mey 27keedii ayaa dagaal aad cuslaa ka qarxay magaalada Burco. Saddex maalmood ka dibna waxa uu ka bilaabmay caasimaddii labaad oo ahayd Hargeysa.
Dagaalkaasi waxa uu socday muddo ku siman saddex sannadood, ilaa uu burburay xukunkii kelitaliska ahaa ee uu hoggaaminayey Maxamed Siyaad Barre tan iyo 1969kii. Buuggu sharraxaad kama bixinayo habkii dagaalku u dhacay, dhimashadii, dhaawicii iyo qaab-dagaalkii guud ahaaneed. laakiin waxa uu diiradda saarayaa sababtii keentay dagaalka iyo saamayntii uu dad iyo dalba ku yeeshay.
Sayid-Axmed M. Yuusuf (Dhegey) waxa uu ku dhashay magaalada Sheekh. Waxbarashadiisii hoose dhexe iyo sare waxa uu ku soo kala qaatay magaalooyinka Sheekh iyo Muqdisho. Waxa uu qoray dhawr buug oo uu ugu danbeeyey buug carruureed la magac baxay BISADDII ANBATAY soona baxay badhtamihii sannadkii tegey ee 2014. Sayid, waa tifaftiraha guud ee warsidahaha ALIF oo ka soo baxa carriga Iswidhan iyo Somaliland.